မတ်လ ၁ ရက်ထုတ် LEGO NINJAGO မော်ဒယ်တိုင်း
01 / 03 / 2021 01 / 03 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 839 Views စာ0မှတ်ချက် 71740 ဂျေးရဲ့ Electro Mech, 71745 လွိုက်ရဲ့ Jungle Chopper စက်ဘီး, 71746 တောတွင်းနဂါး, 71747 The Keepers '' ကျေးရွာ, 71748 Catamaran ပင်လယ်စစ်တိုက်, ခြုံတော, Lego, Lego Ninjago, Lego Ninjago အမွေအနှစ်, Ninja, နင်ဂျာ, Ninjago, NINJAGO 10 နှစ်မြောက်, NINJAGO အမွေအနှစ်, NINJAGO ရာသီ 14, ရာသီ 14, အဆိုပါကျွန်း
ဒါဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်လိမ့်မယ် Lego အစုံလိုက်လှိုင်းသစ်တစ်ခုအနေဖြင့်ပရိသတ်များသည်နောက်အခန်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အမျိုးမျိုးသောအခင်းအကျင်းများမှတစ်ဆင့်ဖြန့်ချိသည် Ninjago.
၏သူရဲကောင်း Ninja ကိုအသင်း Ninjago လာမယ့်ရာသီမှာမရှာဖွေရသေးတဲ့တောတွင်းကျွန်းတစ်ကျွန်းကိုသူတို့နှစ် ဦး စလုံးရှာဖွေရေးအတွက်သွားနေပါတယ် friends နှင့်မုန်တိုင်းအဆောင်လက်ဖွဲ့ကစတင်ခဲ့သည်။ အသစ်ဖြစ်စဉ်များ, လေးတိုက်ဆိုင်ရန် အသစ်အစုံ ဖြန့်ချိပြီ ထို့အပြင်အခြား Ninjago Legacy set သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်သည်။
ဒီမှာအသစ်အဆန်းတွေ Lego Ninjago မတ်လ ၁ ရက်တွင်စတင်မည့်မော်ဒယ်များ:
အသစ်ကလှိုင်းထဲကတစ်ခု, particular, ၎င်း၏တက်ကြွအရောင်အစီအစဉ်ကိုထွက်ပေးသည်။ 71746 တောတွင်းနဂါး 'ခွေးကြီးကောင်၊ ခွေးကြီး' ပေါ်တွင်အခြေခံသည်ဟုဆို အဆိုအရ အိုင်စီတီ Lego ဒီဇိုင်းဆွဲသူနှင့်စိမ်းလန်းစိုပြေရေးအပိုင်းအစများ၊ ဤဒဏ္myာရီဆန်သောသားရဲ၏ရိုင်းပျသောသဘောသဘာဝကိုချဲ့ကားရန်ပုံနှိပ်ထားသောဒီဇိုင်းများပါ ၀ င်သည်။ သင်တို့သည်လည်းကျွန်းသားများ၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်ဆင်တူနှစ်ခုပါဝင်သော minifigures, လေးခုပါဝင်သည်မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။
ရာသီ 14 စုံ၏အသေးငယ်ဆုံး, 71745 လွိုက်ရဲ့ Jungle Chopper စက်ဘီး ၎င်း၏အရွယ်အစားရှိသော်လည်းတစ်ခုခုကိုပြက်ရယ်ပြုစရာအကြောင်းမရှိပါ ပိုမိုတတ်နိုင်သည့်မတ်လအစီအစဉ်တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်ဆံပင်နှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းအပိုင်းနှစ်ခုအပြင်ဒဏ္stormာရီပုံပြင်မုန်တိုင်းကျသည့်အဆောင်လက်ဖွဲ့နှစ်ခုကိုရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ယနေ့ငါတို့ဖြန့်ချိသည့် set အသစ်တိုင်းအတွက်လမ်းညွှန်တစ်ခုကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်သည် မာစတာစာရင်း.
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: နယူတန်တယ်လီစကုပ်
၂၀၂၁ မတ်လအတွက် LEGO အစုံလိုက်၊ အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်အခမဲ့လက်ဆောင်များအားလုံး →